Hlala Ekhaya - I-Airbnb
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMamta
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uMamta iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yam ikude nendawo ephithizelayo ekufutshane neCafe, iivenkile zokutyela, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, iivenkile zezinto ezibhakiweyo nezibhedlele. Iflethi yeentsapho eziza namaqela okanye izibini ezikhangela izinto ezinokusetyenziswa ezipheleleyo nezinto eziyimfihlo. Iflethi yindawo evulekileyo eneebhedi ezitofotofo, itafile yokutyela, ikhitshi elinento yonke neshawa.
Sikulungele naluphi na uhlobo lwenkcazelo efunekayo ukuze kuhlalwe ixesha elide kwinkampani njengendlu yeendwendwe okanye kwiklasi yezoshishino eza kusebenza.
Iflethi ikumgangatho wesibini ibe uyakwazi ukungena kwizitebhisi. Le flethi yenzelwe ukufanela yonke iminyaka neentlobo ngefenitshala yobukoloniyali. Iibhedi kuwo omabini amagumbi zingobukhulu obukumkanikazi. Umatrasi ongakumbi ungafumaneka ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo. Ikhitshi lineketile, i-induction heater, i-microwave, i-toaster kunye nefriji. Iinqanawa zokufudumeza indlu ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe. Ii-crockeries, ii-cutleries, izinto zeglasi, ii-cickle jars, ityuwa kunye nepepile, njl zonke ziyafumaneka ekhitshini. Eyona nto ibalulekileyo kukuba sihlala nje kufutshane, ngoko ukuba kukho nantoni na efunekayo, siya kukuvuyela ukwabelana nabanye.
4.48 · Izimvo eziyi-23
Yingingqi ezolileyo kude nengxolo nothuli lwendlela enkulu. Abamelwane banobubele kwaye banobuhlobo. Le ndlu ikwindawo enesango.
Umbuki zindwendwe ngu- Mamta
Ziindwendwe ezithandwayo, Igama lam ndinguMamta Fomra. Ndingumyili wefashoni ngobuchule ibe bendisebenza ukususela ngo-1995. Ndinevenkile eVishal- De- Mall, eMadurai kwaye ndithengisa ngegama le-MAMTA FOMRA. Ndifundisa iintlobo ezahlukeneyo zobugcisa ezifana nokuyila, ukudayiva, ukuprinta, ukuhombisa nokuziqinisekisa ngokufanelekileyo ngeZiko lam - iMamta Fomra Institute of Fashion Management and Arts. Sinezifundo zokuyila kwefashoni kunye neNkcubeko, usomashishini kunye noLawulo. Nditshatile kamnandi ibe umyeni wam ungumntu osebenza ngezoshishino. Ndisikelelwe ngabantwana abayi-2, bagqibe imfundo yabo eNew Zealand kwaye basebenza apho.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nam ngazo naziphi na izinto ezinokusetyenziswa ezifunekayo kodwa ezingakhange zichazwe kule ndlu. Siza kukuvuyela kakhulu ukwandisa.
Ziindwendwe ezithandwayo, Igama lam ndinguMamta Fomra. Ndingumyili wefashoni ngobuchule ibe bendisebenza ukususela ngo-1995. Ndinevenkile eVishal- De- Mall, eMadurai kwaye nditheng…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Madurai